Hyperbaric Oxygen Treatment Risks - Hyperbaric Oxygen Agwọ HBOT
Home/Hyperbaric Oxygen Treatment Risks - Hyperbaric Oxygen Agwọ HBOT
Hyperbaric Oxygen Treatment Risks - Hyperbaric Oxygen Agwọ HBOTteknamfg2018-01-21T07:06:03+00:00
Hyperbaric Oxygen ọgwụgwọ HBOT Risks
Gịnị bụ Hyperbaric Oxygen ọgwụgwọ? HBOT bụ ọgwụgwọ ọgwụgwọ nke FDA na AMA kwadoro bụ nke onye ọrịa na-eku ume 100% ọgwụgwọ oxygen ka ọ na-eme ka nrụgide nke ụlọ ọgwụ ahụ dị elu ruo n'ókè dị elu karịa nrụgide mmiri. Nke a na-enyere ọsọ aka ma mee ka ahụ nwee ike ịgwọ ọrịa. HBOT bụ nchedo, enweghi ihe mgbochi, nke na-adịghị emerụ onwe ya na / ma ọ bụ usoro ọgwụgwọ. N'ikwu okwu n'ozuzu, enweghị nsogbu dị njọ na Hyperbaric Oxygen Therapy, ma ụfọdụ nsogbu ma ọ bụ mmetụta ndị ọzọ nwere ike ibute ọnọdụ ahụ bụ isi.
Ear Barotrauma - Ihe isi ike na ikpochapụ ntị na-akpata "popping" ma nwee ike ime ka mgbu dị nro. Berotrauma nke etiti bụ ihe kachasị emetụta ụbụrụ HBOT. Onye ọrịa ahụ na-egbochi ụbụrụ site na ihichapụ ntị ha (nyochaa) n'oge ọnụ ụlọ na ịrị elu. Enwere ike iji ọnụ ọgụgụ ntinye aka na ntinye aka, ma ọ bụ, a pụrụ iji tubes nke tympanotomy mee ihe maka ndị na-enweghị ike ịkụnye ala.
Ahụhụ Sinus, Ọrịa Respiratory Mkpụrụ Na-adịghị na Sinusitis - A na-ahụkarị sinus na-adịghị adịkarị karịa ụbụrụ barotrauma nke etiti. Ndị Antihistamines, ndị na-eri nri, na / ma ọ bụ nke ntan nwere ike iji ya tupu ịbanye n'ime ụlọ ahụ. Na mkparịta ụka na mkparịta ụka ngwa ngwa, ọ na-abụkarị enweghị nsogbu.
Myopia na Cataract - Myopia bụ ihe mgbagwoju anya nke na-egosi ugboro ugboro na HBOT. Mgbe ọganihu myopia na-eme n'oge usoro ọgwụgwọ HBOT, mgbe ọ gwọchara ọgwụ, ahụhụ anya na-agbanwe kpamkpam. Ọganihu nke uto na cataracts dị ugbu a bụ ihe mgbagwoju anya na-adị ogologo oge na nrụgide n'elu 2 ATA. Akụkọ ndị bipụtara nakwa ụdị ahụmahụ zuru ezu na-egosi na cataracts ọhụrụ adịghị amalite n'ime usoro 30 na ọgwụgwọ 50 nke a na-ejikarị eme ihe na USA.
Pọlmonary - A na - ekwukarị ngosipụta pulmonary na nke na-adịghị ahụ anya nke nsị oxygen dị ka nchegbu bụ isi na HBOT. Akwụsịtụ ikuku nke na-egbochi ihe ndị a na-ezere ngosi ndị a na-akọwa maka mgbasa ozi na-aga n'ihu n'ihu ndị nkịtị. Ihe mgbaàmà nke Pulmonary adịghị emepụta site na ikpughe ọkụ kwa ụbọchị na ikuku oxygen na 2.0 ma ọ bụ 2.4 ATA maka 2 ma ọ bụ 1.5 awa kwa. Mmetụta nke ikuku oxygen mgbe ị na-eji ngosi yiri nke ahụ bụ ihe gbasara 1 maka ọgwụgwọ Ngwọta 10,000. Ọbụna mgbe ikuku oxygen na-eme, enweghi mmetụta ndị ọzọ ma ọ bụrụ na a ga-ezere trauma usoro. Ndị ọrịa na-egbochi ikuku ụgbọ elu nwere ihe ize ndụ dị ukwuu maka ụbụrụ pulmonary n'oge mkparịta ụka. Mkpụrụ ụrọ pulmonary n'oge mkparịta ụka bụ obere.
Pneumothorax na - Nanị nkwenye zuru oke maka HBOT bụ pneumothorax na-adịghị edozi. Ahụhụ nke pneumothorax tupu ọgwụgwọ HBOT, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee, wepụ ihe mgbochi ahụ maka ọgwụgwọ. Eche X-ray nwere ike ịdị mkpa iji chịpụ pneumothorax, ọ bụrụ na akụkọ ahụike nke onye ọrịa gụnyere: 1) akụkọ ihe mere eme pneumothorax; 2) Otu akụkọ banyere ịwa ahụ thoracic; ma ọ bụ 3) A akụkọ ihe mere eme nke obi mmerụ. Pneumothorax bụ ihe mgbagwoju anya, nke nwere ike ịnwe site na iku ume n'oge mkparịta ụka.
Ogbugba ogwu - A na - akọ na nhụjuanya na 0.01% nke ọgwụgwọ 28,700 ma ọ dịbeghị mgbe a kọọrọ ya na ihe na-erughị 2.0 ATA maka otu awa ma ọ bụ obere. Nkọwa; Davis (1989) nyochara ndị ọrịa 1505 bụ ndị e mesoro n'agbata 1979 na 1987 ma nwee usoro 52,758 nkeji abụọ. Ọgba aghara oxygen mere naanị ndị ọrịa 5, (0.009%) ndị niile natara kpamkpam.
Claustrophobia - Claustrophobia, nke yiri ka ọ dị ugbu a n'ihe banyere 2% nke ọnụ ọgụgụ mmadụ dum, nwere ike ime ka ụfọdụ nchekasị. A pụrụ inye ndị ọrịa nwere nchegbu ọgwụ maka ịdị nro dị nro.
Eze - Ọrụ ezé nile, mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ, na nhicha ga-ezu. Ezigbo barotrauma bụ ma ọ ga-ekwe omume. Ndị ọrịa ekwesịghị ịnata ọgwụgwọ ma ọ bụrụ na ha nwere akwa nwa oge ma ọ bụ na-enweghị ike mgbapụ mgbọrọgwụ.
Akwụkwọ ọgụgụ nke ọgwụgwọ Hyperbaric, KK Jain, MD, Vol. 1, 2, 3
Ahụike Hyperbaric Practice, Eric Kindwall, MD
Nlekọta nke Onye Ndidi Na-enweta Hyperbaric Oxygen ọgwụ, Ntuziaka nke Nlekọta Nlekọta Ahụhụ. 1988 Norkool, D
Hyperbaric Oxygen Agwọ: Kọmitii Report 1999. UHMS
Imezi ahụ na-agba ndụ. DAN (Mgbasa ozi Alert)
UHMS (Society of Medicine Hyperbaric Society)
The Ngwakọta 4000 bụ nke kachasị mma ụlọ Mbụ nke m hụtụrụla.